काठमाडौमा यसरी बन्दैछ बाहिरी चक्रपथ,तपाईको जग्गा के हुन्छ अब हेर्नुस् ? – Arthatantra.com
काठमाडौमा यसरी बन्दैछ बाहिरी चक्रपथ,तपाईको जग्गा के हुन्छ अब हेर्नुस् ?
काठमाडौ । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको काम अबको एक महिना भित्रै सुरु हुने भएको छ । कुल ७१ दशमलब ९३ किलोमिटर लामो बाहिरी चक्रपथ सडक आयोजनाले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा चोभार–सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर सडकको काम थाल्न लागिएको हो ।
यस विषयमा अबको १ महिनाभित्रै भित्र चोभार–सुंगल खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।
जग्गा अधिग्रहणका सम्बन्धमा मंसिर १२ गते नै निर्णय भईसकेको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले छ । मन्त्रालयको स्विकृति पछि यो कार्य अघि बढ्नेछ । यस खण्डमा दुई बर्ष भित्रै कार्य सक्नेगरि अगाडि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत रहेको उक्त आयोजनाले जग्गा एकिकरणको काम गर्नेछ भने सडक बिभागले सडक निर्माणको काम गर्नेछ । आयोजनाले चालु आर्थिक बर्षका लागि एक करोड बजेट पाएको छ । अर्थमन्त्रालयले थप २५ करोड र सडक विभागले उक्त आयोजनाका लागि ४ करोड बजेट पाएको छ ।
बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको ५८ किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) सन् २००६ मा नै तयार भएको थियो । आयोजनाले एक महिना भित्रै चोभारदेखि सतुंगल क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाट तथा नयाँ भवन निर्माणमा रोक लगाउन लागेको हो । सो खण्डको ८ हजार ९ सय ५६ रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नेछ । पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको चोभार सतुंगल क्षेत्रले कुल आयोजनाको २६ दशमलब ४९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, भूकम्पले कम क्षति गरेको भूभागका कारण उक्त क्षेत्रबाट काम थाल्न लागिएको हो ।
बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको निर्माण आरम्भ भएको १० बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि एक लाख रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको मुल सडक ५० मिटर चौडा हुनेछ । मुल सडकको दायाँ र बायाँ क्रमशः २५०÷२५० मिटर जमिन अधिग्रहण गरिनेछ । सो २५० मिटर दायाँ बायाँको जमिनमा बनेका भौतिक पुर्वाधार भत्काइनेछ भने त्यसको क्षतिपुर्ति सम्बन्धित नागरिकले पाउनेछन् । यसरी तयार पारिएको खाली जमिनमा जग्गा एकिकरणको काम गरिनेछ । जस अनुसार जमिन अधिग्रहणमा परेका सबै नागरिकले केहि हिस्सा बाटोका लागि योगदान गर्नुपर्नेछ भने बाँकी जमिन फिर्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
‘एक परिवारले ७ दशमलब ८ प्रतिशत जमिन सडकका लागि योगदान गर्नुपर्छ, बाँकी जमिन जग्गा एकिकरणको रोडम्याप अनुसार फिर्ता हुन्छ, कुनै पनि नागरिकको उठिबास लाग्दैन’, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने । चार लेनको सडकमा फुटपाथ, साइकल लेन र ठुला सवारीका लागि छुट्टै लेनको समेत व्यवस्था गरिएको हुनेछ । यसरी निर्माण हुने बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले उपत्यकाको कुल जमिनको १० प्रतिशतलाई व्यवस्थित शहरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिईएको छ ।
यो सडकमा चार वटा फ्लाईओभर समेत निर्माण गरिनेछ । जसमा अरनिको राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ, फास्ट ट्रयाक, पासाङल्यामु सडकमा फ्लाईओभर निर्माण हुनेछ ।
mahamad hussain mia y
yekdamai ramro kaam aajha ali ahola nai hina paartheyo but aajhai pani kei bigreko xina mero urna saamarthaan xa thankss
Dr Ramu Sharma
यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण काहाँ बाट लिन सकिन्छ ??